Microsoft Forefront TMG server — MYSTERY ZILLION
March 2013 edited March 2013 in Internet Security
ကျွန်တော် တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ထဲမှာ Microsoft Forefront TMG server ထိုင်ထားပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ download လုပ်လို့ မရအောင် ပိတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျ ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတာတွေကို ဆွဲလို့မရတာကို ကျွန်တော်တို့ လက်ခံပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ဆွဲလို့ အခြားလူတွေ လေးသွားမှာမျိုးတော့ မလိုလားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ 1Mb or 2Mb လောက်ပဲ ရှိတဲ့ pdf ဖိုင်လေးတွေကိုတောင် ဆွဲလို့မရသလို တစ်ချို့ဆိုဒ်တွေ ဥပမာ MIT opencourseware လို ဆိုဒ်မျိုးကိုတောင် ပိတ်ထားတဲ့ အခါကျတော့ တော်တော်ကို အခက်အခဲ ဖြစ်ရပါတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင် ကလည်း သင်မပေးသလို ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် လေ့လာဖို့ ကြတော့လည်း Access denied နဲ့ တွေ့ဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်က SE တွေကို တော်တော်ကို စိတ်နာပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီ Microsoft Forefront ကို ကျော်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းလေးများ ရှိရင်ေ၀မျှစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပထမ Firefox မှာ anonymox ဆိုတဲ့ plugin နဲ့ ကျော်သုံးတာ အဆင်ပြေပေမယ့် အခုသူတို့ အဲဒါကို သိသွားပြန်တော့ ဘယ်လိုပိတ်လိုက်ပြန်လဲ မသိပါဘူး မရတော့ပြန်ဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ကူညီကြပါအုံးခင်ဗျာ.............
March 2013 edited March 2013 Administrators
There might be several ways for bypassing such as proxy, vpn, tunneling and so on. But if the company's policies now allow, you should not do it. The company can take action when they found out, it can effect your carrier on that company.
Yes, I understand what you mean and now I am not trying to do it. Thanks for all. But, I really want to know how to pass Microsoft Forefront for knowledge.